यस्तो छ एक हप्तामै १० बर्ष कम उमेरको देखिने घरेलु उपाय – Nepal Trending
यस्तो छ एक हप्तामै १० बर्ष कम उमेरको देखिने घरेलु उपाय
On २८ जेष्ठ २०७६, मंगलवार २२:४८
एजेन्सी । आफूलाई सधै जवान देखाई राख्ने रहने रहर कस्लाई नहोला र ? यासो गर्नलाई धेरै खर्च गर्नु पर्छ भन्ने कुराले धेरैलाई पिरोलिरहेको पनि हुनसक्छ , तर नआत्तिनोस सामान्य घरेलु उपाए अपनाएर पनि आफ्नो बुढौली पनालाई कम गर्न सकिन्छ ।
हो जापानी महिलाहरुको आकर्षक र मुलायम छालाको रहस्य जुन वर्षौ देखि लुकेको थियो त्यो हो चामल, जुन हामिले दैनिक रुपले खाने गर्छौ । हो, हामिले आफ्नो भान्सामा नै बसेर खाना बनाउदै आफ्नो छालालाई सुन्दर र मुलायम बनाउन सक्छौ । न त कुनै पार्लर नै धाउनु पर्ने छ,न त कुनै ब्युटी किल्निक नै , चामलको तेल,चामलको पाउडर र चामलको झोल अर्थात माडबाट हामि आफ्नो छालालाई मुलायम , अनुहारको दाग धब्बा हटाउन,छालालाई चम्किलो पारि छालामा परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्छ । साथै चामल हामिले आफ्नो आहारको रुपमा खान्छौ र एन्टिओक्सिडेंट शक्ति प्राप्त गर्छौ ।
चामलमा लिनोलिक एसिड र स्क्वलीन हुन्छ, जुन एक शक्तिशाली एन्टिअक्सिडेंट हो। जसले छालामा कोलेजन उत्पादन गर्ने काम गर्दछ । यसले मुहारमा हुने चाउरीपना हटाउन मद्दत गर्नुका साथै यसले घामबाट पनि छालालाई सुरक्षित राख्दछ। त्यस्तै चामलमा हुने ‘भिटामिन ई’ र ‘गामा ओरिजिनल’ ले मुटुलाई समेत स्वस्थ राख्नुको साथै हाम्रो शरीरको कोलिस्ट्रोल समेत कम गर्न सहयोग गर्छ ।
चामललाई उसिन्ने र उसिनेको चामलबाट रस अर्थात माडलाई फ्याक्ने र चामलमा १ चम्चा दुध मिसाउने अनि राम्ररी घोल्ने, घोलिसकेपछी त्यसमा मह मिसाउने,
फेस राम्ररी सफा गरेर सुख्खा कपडाले पुछ्ने अनि तयार पारेको फेस प्याक लगाउने सो प्याक सुकेपछि अघि निकालेको चामलको रसले मुख धुने,चामलको पानीमा एन्टिअक्सिडेंट हुने हुदा उमेर अनुसारको चाउरीपन हटाउने र छाला मुलायम पार्ने कम गर्दछ।
यसले रक्तसंचार प्रणालीमा राम्रो सुधार ल्याउछ। कम्तिमा हप्ताको एपटक यो विधि अपनाएमा यसले तपाईलाई साच्चिकै १० वर्ष कम उमेर जस्तो मुहार बनाउनुको साथै छालालाई घामका हानिकारक किरणबाट समेत जोगाउँछ ।
तौल घटाउन खाली पेट सुत्ने बानी छ ? तर, झनै बढ्छ
यस्ता छन् शरीरको अतिरिक्त तौल घटाउने अचुक उपाय